मृगौला प्रत्यारोपण भारतमा भन्दा नेपालमै सस्तो,भारतबाट समेत नेपाल आउँछन् बिरामी - samayapost.com
मृगौला प्रत्यारोपण भारतमा भन्दा नेपालमै सस्तो,भारतबाट समेत नेपाल आउँछन् बिरामी
समयपोष्ट २०७३ माघ ८ गते ३:२२
परिवार–परिवारबीच मृगौला साटासाट गर्न पाउने व्यवस्थापछि प्रत्यारोपण गर्नेको संख्या बढ्न थालेको छ । त्यस्तो व्यवस्था नहुँदा भने थुप्रै बिरामी मिर्गौला नपाएर विगतमा डायलाइसिस गरेर बस्दै आएका थिए । अहिले त्यस्ता बिरामी प्रत्यारोपणमा जान थालेका छन् ।
यसैबीच सरकारले विभिन्न ३२ अस्पतालमा निःशुल्क डायलाइसिस सेवा विस्तार गरेको छ । तर, पछिल्लो समय बिरामीहरूले प्रत्यारोपण रोज्न थालेको मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठले बताए ।
‘विगतमा डायलाइसिसको मात्रै व्यवस्था थियो । मानव अंग प्रत्यारोपण ऐन, ०७२ संशोधन भएपछि गत साउनबाट मिर्गौला साटासाट गरेर प्रत्यारोपण गर्ने बाटो खुल्यो । त्यसकारण डायलाइसिस गर्नेभन्दा प्रत्यारोपण गर्न चाहनेको संख्या बढेको हो,’ डा. श्रेष्ठले भने ।
परिवार–परिवारबीच साटासाट गर्न मिल्ने
मिर्गौला दान गर्ने मानिसहरू नभेट्दा प्रत्यारोपणका लागि समस्या भएपछि केन्द्रले परिवार–परिवारबीच मिर्गौला साटासाट गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको हो । डा. सुमित आचार्यले परिवार–परिवारबीच मिर्गौला साटासाट गर्नेको संख्या बढेको बताए । आचार्यले भने, ‘ब्लड ग्रुपका आधारमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने हो । पहिला परिवारका सदस्यहरूबीच ब्लड ग्रुप मिल्नुपर्छ । त्यसपछि प्रत्यारोपण गरिन्छ ।’
केन्द्रमा अहिले पनि दुई परिवारले एकआपसमा मिर्गौला साटासाट गरेर उपचार गराइरहेका छन् । उदयपुरका २१ वर्षीय उज्वल दाहाल र धादिङकी २८ वर्षीय सुनिता पाण्डेले प्रत्यारोपण गराएका छन् । उज्वलले सुनिताकी आमा गीताकुमारी पाण्डेबाट मिर्गौला लिएका छन् । सुनिताले उज्वलकी आमा हीरामाया खड्काबाट मिर्गौला दान लिएकी हुन् । उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य बनिसकेको छ ।
नेपालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सुरु भएपछि भारतबाट समेत मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा बिरामी आउन थालेका छन् । अहिले पनि केन्द्रमा भारतको अछामबाट प्रत्यारोपणका लागि बिरामी भर्ना भएका छन् । अस्पतालका अनुसार पुनः तीनजना प्रत्यारोपणका लागि आएका छन् ।
यसले नेपालको मिर्गौला प्रत्यारोपणको सेवा भारतमा भन्दा सस्तो, गुणस्तरीय, प्रभावकारी र विश्वसनीय रहेको देखाएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ । मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि भारतको अछामबाट आएका ६५ वर्षका सुलतान दोर्जी अलीले भने, ‘भारतमा २० लाख रुपैयाँसम्म लिने गर्छन्, नेपालमा दुई लाख भारुमा उपचार हुने रहेछ ।’ भारतबाट मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि आएकी सोनिया सिंह पनि केन्द्रमा भर्ना भएकी छिन् ।